Sagalee Bilisummaa Oromoo is live now. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosSagalee Bilisummaa Oromoo is live now.
Manni Murtii aanaa magaalaa Sulultaa qondaaltota ABO kan ta’an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa’el Booran, Lammii Beenyaa dabalatee namoota 10 irratti himatni akka banamu ajaje.
Galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaan waammamu kana keessatti Obbo Mikaa’el Booran, Lammii Beenyaa, Obsaa Abdiisaa, Daawit Abdataa, Abdulgaffaar Umar, Kennasaa Ayyaansaa, Sheek Muussaa Yuusuf, Birraa dhaabaa fi Dhaabaa Wayyumaatu argama.
Wal himannaa hoggantoota ABO irratti Boordiin Filannoo yaada furmaataa dhiheesse
‘Manni murtii Yaasoo Kabbabaa akka bahu ajajus pooliiin gadhiisuu dide’
Abukaaton shakkamtootaa Obbo Tuulii Baay’isaa BBCtti akka himanitti dhaddacha Wiixata darbe oolen poolisiin namoota kunneen ajjeechaa hogganaa Waajjira Bulchiinsaaf Nageenya magaala Burraayyuu duraanii Komishinar Salamoon Taaddasaan walqabatee waan shakkeef galmee haaraa qorachusaa fi himata hundeessuuf guyyootni 15 akka kennamanif gaafatee ture. Abukaatoowwan shakkamtootaa garuu poolisiin waan kana akka hin qoranne yoo qorateera ta’es galmeesaa akka dhiyeessu waan gaafatanif galmeen qorannoo poolisii kun har’atti akka dhiyaatuf beellamamee ture jedhu Obbo Tuulin.
Kana malees dhimmi kun dhimma mana murtii aanaatin ilaallamu osoo hin taane, dhimma manneen murtii federaalaa ilaallatu ta’uun isaa ka’ee akka ture abukaaton shakkamtootaa Obbo Tuulii Baay’isaa dubatu.
”Dhimma federaalaa manni murtii aanaa naannolee ilaaluuf aangoo hin qabu. Kanaaf manni murtii galmee kana cufuu qaba jedhamee waan ka’ef, isa kana qoratanii ajaja kennuuf ture,” har’atti kan beelamame jedhan.
“Har’a yeroo dhaddacha seennu waan haaraatu nu mudate. Abbaan seeraa galmicha qabatanii turan jijjiiramanii jiran. Abbaan seeraas galmeen kun qorannoof beellamame. Qorannees ajaja kenninee jirra. Hoomaa isin hin dhagahu nun jedhan” jechuun himu.
‘Manneen murti ajaja kennan dirqisiisanii raawwachiisuu danda’u’ – Aanga’aa Mana Murtii
Abbaan seeraa galmeen qorannoo poolisii mana murtichaa fi abbaa alangaa qaqqabuu isaa himuun himatni akka hundaa’u ajaja kennuu isaanii Obbo Tuulin BBCti himaniiru.
Haaluma kanaan guyyaa beellama darbee 25/01/2013 irraa eegalee lakkaa’un abbaan alangaa himata akka hundeessuuf guyyootni 15 kennamuusaa dubbatan.
Guyyaa 15 kana keessatti abbaan alangaa yoo himata hin banne ta’e shakkamtootni akka gadhiifaman manni murtichaa ajajuusaas himan.
“Haa ta’u malee abukaatootni dhaddacha irratti dhiyaatan galmeen kan beellamame kanaaf miti. Falmiin ka’aa ture manni murtichaa dhimma kanarratti aangoo hin qabu kan jedhu ture.
Manni murtichaa aangoon qaba yoo jedhe aangon qaba jedhee ajaja yaa kennu. Dhimma aangoo hin qabne irratti ajaja kennuu hin danda’u” jechuun gaafii kaasuu isaanii himan.
Kana malees shakkamtootni kun dhimma ajjeechaa Komishinar Salamoon Taaddasaa irratti wanti gaafataman akka hin jirre Obbo Tuulin himaniiru.
Shakkamtootni kunneen kanaan dura ajjeechaa Artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee lubbuun namaa akka darbu fi qabeenyi akka barbadaa’u ajaja kennuun shakkamanii qorannoon irratti taasifamaa ture.
Gama biraatin dhimma fayyaa fai barnootaan walqabatee shakkamtootni iyyatawwan garaagaraa dhiyyeeffachaa turanis manni murtichaa guyyaa har’aa ajaja osoo irratti hin kennin hafuusaa himaniiru.
Maddi BBC Afaan Oromoo.
Biyya Meksikootti miseensa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa kan ta’e qullaa buusuun rakkoo ummatni isaa keessa jiru ibse.
[SBO – Onkoloolessa 12,2020] Biyya Meksikootti miseensa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa kan ta’e qullaa buusuun rakkoo ummatni isaa keessa jiru ibse.
Dubbii isaatiinis “Tarii amma qullaa dhaabachuu kootti in saalfattu ta’a. Garuu Sabni keessan karaa gubbaa irratti qullaa buusanii, miila qullaa, beela’anii, abdii kutatanii, gara itti goran wallaalanii jiru. Kana immoo kan godhe isini. Qabeenyaa fi badhaadhummaa biyyichaa hundumaa jalaa saamtanii kan ofii waan godhattaniifi” jechuun ibse.
Source: World press
Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa kan Impaayera Xoophiyaa waliin wal bira qabaatii yaada keessan itti kennaa
Waamicha Hiriira Nagaa Deeggarsa Mootummaa ce’umsaa Oromiyaa 10 October 2020
Isaias: What is the secret behind Isu’s transformation from Africa’s N. Korea to the World’s America?